Caddị cadastre jikọrọ ọnụ: The Webinar - Geofumadas
Ụdị ihe atụ ahụ: Webinar
Julaị, 2013 cadastre, Akụziri CAD / GIS
N'izu gara aga, e webatara webinar na-egosi ihe nlereanya nke Cadastre nke Multifunction na mpaghara obodo.
Maka ndị tufuru ya, lee ị nwere ike ịhụ ka ọ gbue oge, ma ị nwere ike budata pdf nke ngosi.
Banyere webinar nke cadastre
The webinar na-elekwasị anya na usoro mgbochi e mere naanị maka ọrụ a, na-eji ihe omume na-akpali mmasị a na-akpọ mkpakọrịta nke municipalities.
N'ezie, mancomunidad bụ ọgbakọ afọ ofufo nke ndị ọchịchị na-emekọrịta ihe yiri nke ahụ, dịka ndagwurugwu na-arụpụta ihe, ebe a na-egwu mmiri, ebe nchekwa mmiri, ebe a na-arụ ọrụ mmiri, wdg. Mkpakọrịta a na - eduga ha iji nweta nkwa akụ na ụba iji mepụta ngalaba ọrụ ime obodo nke ha nwere olile anya ijikwa akụrụngwa ma jiri akụnụba nke ọnụ ọgụgụ iji nye ọrụ ga - enweghị ike ịkwado.
Banyere ọrụ oru cadastre
Na Honduras, ha dịrị kemgbe afọ ndị 1,000, mana ha na-enweta ike dị ukwuu site na nkwado nke ndị na-arụkọ ọrụ na iwu obodo ọhụrụ na Hurricane Mitch na-eme ka ha bụrụ ọnọdụ zuru oke iji nyefee akụrụngwa na-enweghị nsogbu na mpaghara quaternary (gọọmentị etiti). Yabụ, iwu obodo ahụ na-eme ka a mata ha dị ka obodo; ya na ikike inwe onodu iwu. Ndị ọchịchị na-enye onyinye kwa ọnwa ego gọọmentị etiti na-enyefe ha; dịgasị iche site n'otu gaa na nke ọzọ, mana n'ozuzu ọ karịrị XNUMX dollar kwa ọnwa kwa obodo, nke opekata mpe onye nhazi ọrụ teknụzụ, onye injinia obodo maka imepụta na nlekọta nke ọrụ na onye ọrụ aka maka enyemaka teknụzụ na nhazi / mpaghara ego. Dabere na njikwa nke oru na ọnụ ọgụgụ nke ọchịchị, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ha na-enye na gburugburu ebe obibi, na-elekọta mmadụ na ọha na eze ọrụ ebe na-eto eto.
Ndi Commonwealth abughi ndi a mara amara na nkewa ochichi, n’agbanyeghi na amatara ya na nhazi ochichi; ruo n'ókè ọ nwere ike ịrịọ ka ewepu pasent ndị gọọmentị mere site na nnyefe ha ma tinye ha na akaụntụ ha. Ọbụna ihe ịma aka siri ike, iji dozie ọrụ ha ma ghara ime ka ha bụrụ obodo ukwu ma ọ bụ Otu Na-abụghị Ndị Gọọmentị; kama nke ahu, iwusi obodo ndi ahu ike ma nye ndi oru ha ka nma.
Maka ikpe ahụ, njikọ nke ndị ọchịchị nke okpuru mmiri Higuito, nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ, nwere obodo iri na atọ. O gosipụtawo na maka dollar ọ bụla nke obodo na-enye, ọ na-eweghachi 13 na ndokwa ọrụ na njikwa ọrụ.
Ruo ugbu a, ọtụtụ usoro mmemme na-ekwenye na commonwealth bụ ezigbo nkwa nke nkwado maka usoro mmepe na Honduras.
Nke ahụ bụ akụkọ ahụ mgbe anyị na-arụ ọrụ cadastre Ọ malitere na 2007. Ya mere e wuru atụmatụ nke akụkọ ụgha na enwere ike ịme naanị cadastre site na akụ ndị ọzọ, na ọ na-efu nnukwu ego iji mejuputa ya.
Awara ụfọdụ atumatu maka mmepe nke ndị na-anya ụgbọelu na iwu nke ihe nlereanya, n'etiti ha:
Nkwado dabere na obodo niile. Ndị obodo anaghị aga n'otu n'otu, na-eche na na Honduras ihe karịrị 94% nke ndị ọchịchị dị n'otu, a tụpụtara ka e mee ya n'ụzọ dị otu a, nke mere na ndị obodo bụ onye nkwado nke nkwado, ịrụ ọrụ dị ka mmata, nlekọta na nke sochiri n'ihu. Maka nke a, akọwapụtara njikọta nke ndị ọrụ cadastre na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-esite na nke kachasị mma nke ga-esi na semester nke nyocha nke cadastral pụta. Ngwa dị ka Nhazi GPS
ma ọ bụ ngụkọta ebe na-adịghị nyere municipalities, ma ndi amuru na-ebuli na-akwụ ụgwọ ma welie ọrụ nnyefe, gụnyere ọdịdị ala n'ime ebe ọzụzụ-ewere na ndị municipalities nānọgide a otutu ego na topographical ọrụ na ọdọ mmiri ahụ nwere ike na-agba ọsọ na-akwụ ụgwọ ihe ndị ọzọ ala
Scalability na echiche multipurpose. Edepụtara ndepụta nke ngwa na usoro dị mkpa iji gosipụta ngwa nke cadastre na usoro akụ na ụba, iwu, iji ala na usoro mmekọrịta akụ na ụba. Ya mere na nyocha ahụ nwere ike ịrụ ọtụtụ ebumnuche mana na enwere ike ịnakwere ihe akaebe nke ngwa na usoro nwayọ nwayọ, na-enweghị imebi obodo nke obere akụrụngwa na okwu ndị na-enweghị isi ma ọ bụ na-amachi obodo nke nwere ọnọdụ teknụzụ, akụ na ụba ma ọ bụ njikọta ka mma.
Ihe e kere eke nke nọchiri ọgbọ ọzọ. Ndị ọkachamara hụrụ ọkachamara na akụ na ụba obodo na ahụmịhe na ndị ọchịchị niile na-ese isi awọ na n'ọtụtụ ọnọdụ nwere iguzogide okwu teknụzụ na eserese dijitalụ, GIS na iji akụrụngwa ọhụrụ; Ya mere, e gosipụtara imepụta ihe ọhụrụ na ndị na-eto eto na-agụsị akwụkwọ na kọleji n'oge na-adịbeghị anya na mpaghara na mmekọrịta A ga-akụzi ọgbọ ọhụrụ a na nsogbu obodo na ahụmịhe nke ndị agadi mana ọ ga-eme ka okwu nke teknụzụ bụrụ nke nwere obere nguzogide mgbanwe.
A gbalitekwara usoro usoro iheomume na nhazi iji hụ na njikwa ihe ọmụma gafere ọrụ ahụ.
M ga-ekweta na ọtụtụ ihe ndị dị ka anyị na-eche, ma ugbu a anyị na-egosi nsonaazụ ahụ na Latin American na-ekwu na anyị ụtọ na anyị nwere otutu nlereanya na a na-arụ ọrụ, na pụrụ inye karịrị ala ebe e mere.
Nkọwapụta nke seminar nlereanya nke ụlọ nzukọ
Emepụtara webinar site na ikpo okwu MundoGEO, na mkpokọta enwere ndị bịara 300; nke a bụ nchịkọta nke ndị sonyere:
A ọtụtụ ndị bịara bụ South America (82%), Europe a 7%, dị ka ndị America ma karịsịa Mexico na 4% nke Central America na Caribbean.
Ọ bụrụ na anyị ejiri ụdị ndị ọkachamara kpọrọ ihe, eserese na-esonụ bụ ihe nnọchiteanya:
Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngalaba gọọmentị, otu 26% nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na otu 16% nke mpaghara mpaghara.
Na usoro ọzụzụ, 93% sitere na Injinịa, 20% si Cartography, 17% si Cadastre na 10% sitere na Topography. Enwere 22% site na mpaghara ndị ọzọ, dịka akụ na ụba, gburugburu ebe obibi, mpaghara oke ọhịa ... n'etiti ndị ọzọ.
Ugbu a, enwere ihe ịma aka ịkekọrịta ihe nlereanya ahụ na ndị ọzọ na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ, yana mba ndị ọzọ nwere ike ịmasị ... na ọtụtụ ajụjụ ịza ajụjụ ahụ bịakwutere m mgbe webinar gasịrị.
Lee ị pụrụ ịhụ ụfọdụ Ngwaahịa nke usoro usoro, na vidio ndị ọzọ maka ọzụzụ.
Previous Post«Previous Nkọwa n'etiti ArcGIS na SuperGIS (nke dị ugbu a na Spanish)
Next Post Bentley: Ngwa maka mobile na ndị ọrụ - na DGN-Next »
Otu azịza na "Usoro njikọ cadastre jikọrọ ọnụ: The Webinar"
Carlos Eduardo Arizmendi Aguilar kwuru, sị:
July, 2013 na
Mmasị: Ekele na mbipụta ahụ. M nwere ike ikwu na ị ga-agbakwunye na peeji nke otu esi ejikọta gị